Waxaa Jira Wax Lagu Sheegayo Rakibaadda Muraayadda Musqusha! Ma Ogtahay Maxay Tahay
Bogga ugu weyn / blog / Waxaa Jira Wax Lagu Sheegayo Rakibaadda Muraayadda Musqusha! Ma Ogtahay Maxay Tahay
2020 / 10 / 04 Qoondayntablog 2540 0
Su'aasha ugu horreysa ee hubaal u soo bixi doonta kuwa u muuqda cinwaanka tilmaamaha ku jira waa:
Maqaalka maanta iibinta khuraafaadka?
Ha noqon kuwa lagu qoslo, xayawaanku xitaa manida ma awoodi karaan shahwada markii la aasaasay dalka, waxaan ku jirnaa heerkii ugu sarreeyay nolosha, guushii hantiwadaagga ayaa ka hadlaya sayniska ~
Markaas waa maxay, feng shui?
Waa inaan hubin jadwalka jaalaha ah markaan baxno, aan xusno maalmo macquul ah arooskeena, iyo markay tahay iibsashada guri iyo dayactirka, kuweena… Waxa ugu horeeya ee aabaha iyo aabaha sameyn doonaan ayaa ah inay weydiiyaan sayid feng shui inuu hubiyo baxay.
Qurxinta guriga ee xiriiriyahan, fiiri feng shui waxay umuuqataa inay tahay qayb lagama maarmaan ah. Marka maanta, aan kuu soo bandhigno tabo ku saabsan rakibidda muraayadaha musqusha:
Ka fogow qaab qaab-qaabeed
Guud ahaan marka laga hadlayo, muraayada musqusha waa inay ahaataa afar gees oo la taaban karo, maxaa yeelay laba jibbaarada waxay u taagan tahay dheelitir iyo kala dambeyn sidaa darteed taasi waxay noqon doontaa mid aad u xasilloon musqusha berrinka feng shui qi, si loo ilaaliyo jawi is waafajinaya guriga.
Iska ilaali Muraayado aad u tiro badan
Badanaa, aagga musqusha ma aha mid aad u ballaaran, iyo dadka qaar si loo kordhiyo dareenka boos ee musqusha, dooro inaad ku rakibto muraayado dheeri ah, laakiin dhab ahaantii, tani sidoo kale waa mid aan fiicnayn feng shui. Markay dadku kacaan habeenkii, muraayado aad u tiro badan oo ku jira musqusha oo ka muuqda sawirka, way fududahay inay dadka cabsiiyaan ...
Ka Fogoow Musqusha
Musqusha waa meel ay isugu yimaadaan gaaska wasakhda ah, musqusha inta badan cadhada waxaa soo saara musqusha, muraayada waa inay ballaarisaa booska iyo doorka aagga birlabta, hadday labaduba sax yihiin, waxay samayn doontaa ballaadhinta gaaska wasakhaysan, sidaasna ku baabi'isa guud ahaan musqusha Airfield.
Ha Ku Rakibin Muraayadaha Albaabka
Muraayadaha musqusha waa inaan lagu dhejin albaabka. Feng shui, muraayada ayaa door muhiim ah ka ciyaari kara cayrinta jinka sharka leh. Albaabka badiyaa waxaa ilaaliya ilaah albaab ah, haddii muraayadda musqusha ilaa meelaynta albaabku ay fududahay in laga cabsado ilaah albaabka.
Iyadoo la tixgelinayo arrimahaas kor ku xusan, saaxiibo badan ayaan iibsan karin rabitaankooda wadnaha ee qolka musqusha, qaar ayaa kaliya u adkeysan kara xanuunka una degi kara kaalinta labaad ee ugu fiican.
Ka dib fiiri, Shen Wang musqusha midkan muraayadda muraayadda feng shui, si fudud ayaa kaa caawinaya inaad xalliso dhibaatada feng shui ee qaabka bannaan. Baahida loo qabo in la isticmaalo muraayadda markii la furayo, maaha marka aad xidhi karto albaabka golaha wasiirrada.
Hore:: KORITAANKA AAN LA AAMINI KARNAYN EE SUUQA QAADASHADA DIGITAL EE DHAQANKA Next: Caqli, Xiriir Laheyn, Iskutallaabku Wuxuu Ku Socdaa Guud Ahaan! Noocyo Shisheeye oo Cusub Soo Bandhigida Musqusha